Pregabalin powder kubata chirwere chekufa nekuzvidya mwoyo | PUTA yakatsvaga
/Blog/Pregabalin/Zvese zvaunofanirwa Kuziva Nezve Pregabalin
Posted on 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 akanyora Pregabalin.
1.Chii chinonzi Pregabalin?
Pregabalin (148553-50-8) mushonga unonyanya kutengeswa pasi pezita rekuti Lyrica mumatunhu akasiyana siyana munyika. Iyo anti-pfari mushonga iyo inonziwo anticonvulsant. Mushonga unoshandiswa kudzora pfungwa dzehuropi dzinotungamira mukubata. Kune rimwe divi, Pregabalin inokanganisa makemikari ehuropi ayo anotumira masaini ekurwadziwa mukati memuviri wetsinga. Mushonga uyu unoshandiswa zvakare munyika yekurapa kurapa marwadzo akasiyana anokonzerwa nezvirwere zvakasiyana siyana senge maronda etsinga anokonzerwa nefibromyalgia, chirwere cheshuga, uye kunyange maronda ekumusana kwepamuviri.
Pregabalin iripo makapu, yakatambanudzwa-kubudiswa, kana refu-inobata mapiritsi uye zvakare mumuromo mhinduro (mvura). Mafomu ese ePregabalin anoshanda nenzira imwechete, uye chiremba wako achave munhu akanakisisa kusarudza iyo yakakodzera iwe zvichienderana nechimiro chako kana izvo zvaunoda kuzadzisa nekupera kwegwaro rekupora. Kuve mushonga wemuromo unoshanda semishonga yekurapa yakanakisa kune vazhinji varwere vasingafambidzane majekiseni. Mushonga uyu zvakare unogona kutungamira kumamwe mhedzisiro yakaipa kana yakanyanyisa kana kushandiswa zvisirizvo. Ita shuwa kuti iwe unogara uchitevera iyo yekuraira yekuyera kuti uwane mhinduro dzakanaka.
Pregabalin (148553-50-8) inogona kushandiswa pamwe chete nemimwe mishonga kubatsira kurapwa kwekutanga kwekubata muvana vane makore angangoita mana ekuberekwa nevakuru zvakare. Kwemakore mazhinji ikozvino, mushonga uyu wave uchitamba basa rakakosha munyika yekurapa, uchiuita mumwe weanonyanya kurapa-kubvisa mushonga pamusika. Mushonga unofanirwa kutorwa chete pasi pemutemo wechiremba kuti uwane mhedzisiro. Nekudaro, gara uine chokwadi chekuti iwe unowana iyo Pregabalin kubva kumutengesi akavimbika kana mugadziri akakukomberedza.
2.Pregabalin mashandiro anoita
Pregabalin ndeye yekirasi yeananticonvulsants yemishonga. Kazhinji, zvinodhaka zviri mukirasi ino zvinoshanda nenzira imwechete uye zvinoshandiswa pakurapa kwemamiriro akafanana. Izvo hazvisati zvanyatsojeka kuti yakanyatsoita sei iyo Pregabalin inoshanda, asi inotendwa kushanda kuburikidza nekudzikamisa misara yakakuvadzwa mumuviri inotungamira mukubatwa kana kurwadziwa. Mushonga unodzora marwadzo ari mumuviri anokonzerwa nezvikonzero zvakasiyana kana kuti zvikwere. Taura nachiremba wako kuti uwane rumwe ruzivo nezvePregabalin.
MuUnited States of America, Pregabalin yakatenderwa kushandiswa mukurapa kwezvirwere zvakadai;
Post-herpetic neuralgia kana marwadzo anoitika mushure mekutenderera
Chirwere cheshuga neuropathy uye
Fibromyalgia mamiriro ehutano ayo anosanganisira kurwadziwa kwakapararira, senge mumhasuru, hukama hwehutsi, kana kukwidziridzwa uye kurwadza kupindura kubata. Mune mamwe matunhu epasi, senge muEurope, Pregabalin inoshandiswa pakurapa kusagadzikana kwekunetseka, mamiriro ekuti mamwe mishonga anoshandiswa kurapa muUnited States of America. Sezvambotaurwa, Pregabalin inoshandiswawo nemamwe madhiraini kusimudzira mhedzisiro. Vanachiremba vanokwanisa zvakare kuyera mushonga kune varwere vane akasiyana mamiriro anogona kurapwa kana kudzorwa nePregabalin.
Pregabalin dosage inoenderana nemamiriro ari pasi pekurapwa. Nekudaro, yakaderera dosage iri 25mg, nepo yakanyanya 600mg pazuva. Chiremba wako achakuisira iwo chairo kipimo iwe mushure mekutarisisa mamiriro ako. Dzimwe nguva midhiya inokupa zano kuti utange nemadosi akadzika, ayo anogona kugadziriswa nenguva. Mune zvimwe zviitiko zvinoshamisa, chiremba wako anogona kuwedzera dosage yacho mberi. The Pregabalin dosage ndizvo zvinotevera;
Adult Diabetesic Neuropathy dosage
Kuti uburitsirwe-ipapo, iyo yekutanga dosage iri 50mgs iyo inofanira kutorwa katatu pazuva. Iyo piritsi inogona kuwedzerwa nachiremba wako ku100mg kutorwa katatu pazuva mukati mevhiki yekutanga, iyo ichatemerwa nemhinduro yemuviri wako kune yekutanga dosi. Kuongororwa kwekurapa kwakakosha kutarisa kufambira mberi kwekurapa. Panguva ino, iyo Pregabalin dosage inogona kutambanudzwa kusvika kuhukuru hwe300mg pazuva, asi izvo zvinofanirwa kuitwa nenguva. Makambani anogara achirayirwa kuti atange nemadosi akaderera kuti aderedze mhedzisiro.
Iko kuwedzerwa-kubudiswa kunozoda kuti iwe utore dosi yekutanga ye 150mg danho remuromo kamwe pazuva, uye zvinokurudzirwa kuti uzvitore mushure mekudya kwemanheru. Chiremba wako anogona kuwedzera muyero kusvika kune yakanyanya yeiyo 330mg zuva nezuva. Kuwedzera kwemupiritsi kunogona chete kuitika mushure mekunge chiremba aongorora kufambira mberi kwako uye kushivirira kwemuviri wako kunaPregabalin. Rangarira, usagadzirisa iyo Pregabalin (148553-50-8) dosi pasina kutungamirirwa nachiremba wako. Inogona kutungamira kumarutivi akakomba.
Zuva rauchange uchichinja mushonga tora svutugadzike yemangwanani sezvakarairwa nemushonga wako wobva watanga iwo mushonga mutsva mushure mekudya kwako kwemanheru. Zvidzidzo zvekurapa zvakaratidza kuti kutora dosages yakakwira kusvika kune 600mg pazuva hazvipe chero humwe rubatsiro. Saka, iwe unofanirwa kunamatira kune yakakurudzirwa piritsi. Kutora iyo yakakwira 300 kuenda ku330gm pazuva haina zvakare kukurudzirwa sezvo inogona kutungamira mumhedzisiro-inokanganisa migumisiro.
Postherpetic Neuralgia mukuru dose
Pano madhosi akapatsanurwa mumapoka maviri, kukurumidza-kusunungurwa, uye kuwedzera-kubudiswa, uye iwo maviri akasiyana mumadosi. Semuenzaniso, mukusunungurwa kwazvino, iyo yekutanga yePregabalin dose ndeye 150mg kune 300mg pazuva, iyo yakakamurwa kuva maviri kana matatu mishonga pazuva. Saizvozvowo, madhidhiji anogona kuwedzerwa kune 300 pazuva mushure memazuva mashoma zvichienderana nemabatirwo aunoita muviri wako kune yekutanga dosi. Kana mhedzisiro yacho ichifadza, ipapo chiremba haazove nechikonzero chekuwedzera icho. Mushonga uyu unogona zvakare kudzikisa dhiganiro yacho zvimwe kana ukatora madhidhioji uye wonzwa kurwara.
Mushure mekutora 300mg dosage kweanoda kusvika mavhiki maviri kusvika mana, uye zororo rekurwadziwa harina kukwana, chiremba anogona kusarudza kuisimudza anenge 600mgs zuva nezuva kuti atorwe kaviri kana katatu pazuva. Rangarira, 600mg pazuva ndiyo yakanyanya kukurudzirwa dosage kune varwere vese. Kuwedzeresa mwero uyu kunogona kutungamira kune wakakomba Pregabalin madhara, izvo zvichave zvakaoma kana kudhura kudzokera kumashure.
Pano, yekutanga Pregabalin muyero ndeye 165mg iyo inofanirwa kutorwa kamwe pazuva, uye zvinokurudzirwa kuti uzvitore mushure mekudya kwemanheru. Iko kune zvakare mukana weiyo muyero kuti uwedzerwe kumberi kusvika ku330mg mukati mevhiki rekutanga reyero kutenderera. Mushure memavhiki maviri kana kwemavhiki ekurapa uye pasina hukuru hwekuvandudza mumarwadzo ipapo chiremba wako anokwanisa kukwidziridza muyero kusvika kune yakanyanya 660mgs pazuva. Paunenge uchichinja madosi, tora iyo yemangwanani kuti uburitse nekukasira wobva watanga iyo yakawedzerwa-kuburitsa mishonga mushure mekutora kudya kwemanheru.
Epilepsy mukuru dosi
Yekurapa kwekushupika, yekutanga mushonga wemuromo ndeye 150mg pazuva, iyo yakakamurwa kaviri kana katatu. Sezvakangoita mune mamwe marapirwo ekurapa, chiremba anogona kuwedzera iyo dofo ku600mgs pazuva uye anofanirwawo kukamurwa kuti utorwa mumaviri kana katatu pazuva. Heino upamhi mwero ndeiyo 600mg pazuva.
Iko kushanda uye mhedzisiro yemushonga uyu zvese zvinoenderana nemupimo wemushonga. Hapana kudzidza kwakaratidza kukosha kwekubatanidza Pregabalin ne gabapentin. Nekudaro, chiremba wako anokurayira zvakanyanya pane izvo zvinodhaka zvekushandisa pamwe chete nemushonga uyu.
Fibromyalgia mukuru piritsi
Pano muyero wekutanga uri 75mg inotorwa kaviri pazuva uye inogona kugadziridzwa kusvika ku150mg kaviri pazuva pazuva revhiki rekutanga reyero. Muyero wacho unogona zvakare kuwedzerwa kuenda ku225mg kutorwa kaviri pazuva. Iyo yakanyanya chipimo chemushonga we fibromyalgia ndeye 450mgs uye muyero wekuchengetedza unosvika 300mg kusvika 450mg. Kune rimwe divi, zvidzidzo zvinoratidza kuti kutora mazana mazana matanhatu emamirioni pazuva hakupi chero mabhenefiti ePregabalin asi kunogona kukonzera mhedzisiro yakaipa.
Pregabalin yekurwadziwa kweNeuropathic
Dhivha yekutanga ndeye 75mg pazuva uye inogona zvakare kuwedzera kune 150mg pazuva. Muchiitiko, mushure memavhiki maviri kana matatu dosage, hapana zvakakosha kugadzirisa, ipapo mushonga wako unogona kuuchinjisa kumusoro ku300mgs. Iyo Yakakurudzirwa yekuchengetedza dosage kubva ku150 kusvika 600mg yakakamurwa dosage pazuva.
Munyika yekurapa, zviri pachena kuti Pregabalin anounza mhando uye zvinonakidza mhedzisiro yevashandisi vanotevera mirairo yemyero. Sezvo yekutanga yakabvumidza mushonga mu2004, mamirioni evarwere akabatsirwa kubva kuPregabalin kunyanya mukutarisira marwadzo emitsipa anokonzerwa nezvirwere zvakasiyana-siyana zvakaita seEpispsy, Post-herpetic neuralgia kana marwadzo anoitika mushure mekurumwa, chirwere cheshuga neuropathy uye Fibromyalgia. Zvichienderana nekuti muviri wako unosangana sei nePregabalin, unogona kutarisira kunakidzwa nemhedzisiro mukati menguva pfupi kwazvo.
Mazuva ekutanga eiyo muyero anopa chiremba wako mukana wekuti uongorore kufambira mberi kwako usati wafunga nezvekugadzirisa muyero pasi kana kumusoro. Zvidzidzo zvinoratidza kuti iwe unofanirwa kutarisira mhedzisiro mukati memazuva mashoma ekutanga edhiyo. Pregabalin imushonga unoshanda nekukurumidza, uye iwe unofanirwa, nekudaro, kutarisira kuti marwadzo achadzikiswa mukati memazuva ekutanga emutero. Kana iwe ukasawana chero kuvandudzwa mukati mevhiki yekutanga yekutora yako dosi, zivisa chiremba wako kuti agadzirise muyero wemhedzisiro. Miviri yevanhu yakasiyana, uye hazvisi otomatiki kuti iwe unowana mhedzisiro nekukurumidza sezvinoita vamwe. Zvakare zvichienderana nemamiriro ezvinhu auri pasi pemushonga, mhedzisiro yacho inosiyana. Zvimwe zvezvinojairika Pregabalin mhinduro inosanganisira;
Inoderedza Marwadzo emutsipa
Pregabalin chinodhaka chine simba kana zvasvika pakuderedza marwadzo anokonzerwa nekukuvara kwemitsipa senge paripheral diabetesic neuropathy, chemotherapy-indedu neuropathic pain, kana Fibromyalgia. Zvidzidzo zvakasiyana zvinoratidza kuti Pregabalin ndiye mushonga unoshanda kwazvo mukuderedza maropic neuropathic. Iyo yekuwedzera inoramba ichishanda kana ichishandiswa yega kana kunyangwe kana yasanganiswa nezvimwe zvinowedzera zvekurapa.
Inovandudza hupenyu hwepamoyo kune varwere vane Fibromyalgia
Sezvambotaurwa, Fibromyalgia mamiriro ezvinhu aunotambura nemaronda akapararira. Zviratidzo zvaro zvinosanganisira kurwara kwakashata kwekurara, kupera simba, kunetseka, kushushikana, kubatana, uye kushaya tsandanyama. Mushonga unobatsira varwere kudzora zvese izvi zvinokanganisa.
Anoderedza Epileptic zviratidzo
FDA yakatendera Pregabalin (148553-50-8) kurapwa kwekushupika. Mushonga uyu unokurudzirwa kune varwere vane chikamu chechisimba nekuda kwekukuvara kwehuropi. Izvo zvinoshandiswawo senge adjunctive kurapa kwevanhu kuti mimwe mishonga yekurwisa-epileptic vakatadza kushanda.
Kunyangwe muUnited States of America, Pregabalin haishandiswe kudzikisa kuzvidya mwoyo, muEurope, mushonga waratidza kuve mhinduro yakanakisa. Pregabalin anonzi anoshandiswa off-label kubatsira mukurapa kwekushushikana kusagadzikana munzvimbo dzakasiyana dzepasi. Kune zvimwe zviitiko zvisina kunyorwa apo chiremba wako anogona kuzviwana zvichida kuendesa Pregabalin uye achiri kuendesa mhedzisiro yemhando. Dzese dzepfupi uye kwenguva refu zvidzidzo zvekurapa zvinoratidza kuti mushonga uyu unokwanisa kurapa zvakanyanyisa kunetseka kwakanyanya muvanhu zvakanyanya vanhu vakuru.
Chakavanzika chehunhu hwePregabalin mhedzisiro ndeyekusanganisira chiremba wako mune yese dosi maitiro. Usagadzirise iyo Pregabalin dosage pasina kuudza wako mushonga. Zvakawanda sezvaunogona kutenga zviri nyore mushonga kubva kuzvitoro zvakasiyana zvepamhepo, usatange kuutora usina kuenda kunovhenekwa kurapwa. Mushonga uyu wave nesimba pakubvisa marwadzo anokonzerwa nezvikonzero zvakasiyana. Vamwe vatambi vanoshandisa zvakare Pregabalin kudzora marwadzo emhasuru, uye kurwadziwa kwepamuviri, izvo zvakajairika nekuda kwekushanda kwakanyanya uye makwikwi.
Uku kukurumidza kuita-chinodhaka neanoshanda Pregabalin hafu-hupenyu yeawa 6. Naizvozvo, kune zviri nani Pregabalin mhedzisiro, iwo madosi anofanirwa kukamurwa kuva maviri kana matatu pazuva. Kuve mushonga wemuromo, zvinoita kuti zvive nyore kwauri kuti uwane mhinduro sezvo ine pfupi kubvisa hafu-hupenyu. Nguva dzose yeuka kuomerera kune iyo dosi yemirairo yakapihwa nachiremba wako. Kunyangwe iwe ukatora yakaderera kana yepamusoro dosage, iyo hafu-hupenyu hwemushonga uyu unoramba wakafanana.
Kungofanana nemamwe madhiragi pamusika nhasi, Pregabalin inogona zvakare kukufumura iwe kune yakanyanya mhedzisiro mhedzisiro kana iwe ukaidarika. Kuwanda kweiyo Pregabalin mativi zvinokonzerwa nekushandiswa zvisirizvo kana dzimwe nguva kana system yako yemuviri ikaita zvisina kunaka nemushonga. Ndicho chikonzero nei nguva dzose zvichikosha kuti utange nemadosi akadzika, ayo anogona kuzogadziriswa nemedic yako mushure mekutarisisa kuti muviri wako unopindura sei pakurapwa. Mamwe emamwe anowanzoitika Pregabalin madhara anosanganisira;
Dziziness-dzimwe nguva iwe unogona kunge uchitsamwa paunenge uchinwa uyu mushonga, asi unofanirwa kunyangarika mushure menguva yakati.
Kuputika, muromo wakaoma, uye kutemwa nemusoro zvimwewo zvakakurisa mhedzisiro yaunogona kuwana paunotora mushonga uyu.
Vazhinji vashandisi vePregabalin vanogunun'una nekuwedzera kudya, izvo zvinoguma nekuwedzera uremu.
Kune zvekare zviitiko zvekushomeka kwemhasuru kurongeka, matambudziko ekutaura, uye kushomeka kwemuviri.
Iyi mhedzisiro yePregabalin yese inopera mushure menguva yakati, asi kana ikagara kwenguva yakareba kupfuura yaitarisirwa, iwe unofanirwa kuzivisa chiremba wako kuti akubatsire kuwana mhinduro isati yaipa. Kune rimwe divi, kune mamwe maitiro akakomba ekuti iwe unofanirwa kubata mushonga wako nekukurumidza iwe paunotanga kusangana navo, uye zvinosanganisira;
Matambudziko ekuona, iyo nguva yaunotanga kuona zvakapetwa kaviri kuona, kana kuona kwakashata kana chero shanduko mumaziso ako usazeza, fonera chiremba wako nekukurumidza.
Kuzvimba kwechiso, miromo yemuromo, maziso, huro, rurimi, mutsipa, kana misoro yemusoro zvinofanirawo kutaurwa nekukasira.
Mamwe mhedzisiro yakaipa anosanganisira; mabhurukwa, kumucheka, kuzvimba kwemakumbo, makumbo akadzika, maoko, uye maoko kana kurwadziwa kwepachipfuva.
Nhau dzakanaka ndedzekuti zvese izvi Pregabalin mhedzisiro inogona kudzorwa kana iwe ukaudza chiremba wako nenguva kunyangwe mamwe mamiriro achazonyangarika nenguva kana iwe uchinge waona yepamusoro mhedzisiro yataurwa pamusoro usaenderere kuramba uchitora muyero usingazivise mushonga wako. Chiremba wako anogona kusarudza kumisa muyero kana mamiriro acho asingadzoreke kana kupa imwe nzira, yakachengeteka mishonga kwauri.
Uyu mushonga wakazviratidza kuti uri pakati pevanonyanya kurwisa anti-epileptic mushonga pamusika nhasi. Iyo yakashandiswa kugadzirisa maropa europathic pasi rose, uye mune mamwe matunhu seEurope, yakagamuchirwa kurapwa kwekunetseka. Pane zvakawanda zvakanaka zvaungave uchifarira kana uchinge watora mushonga uyu, Pregabalin inobatsira izvo zvinotevera;
Inopa mhedzisiro yemhando yepamusoro
Zvidzidzo zvekurapa zvakaratidza kuti Pregabalin inopa mhedzisiro yemhando kune vese vashandisi avo vanotevera mirairo yemyero. Kune avo vanoishandisa kune neuropathic kurwadziwa, iwe unogona kuona kuvandudzwa kunyangwe mushure mekutora dofo rako rekutanga. Mukati mevhiki yekutanga, iwe unofanirwa kutanga kuona zvese zvakazara mhedzisiro, uye izvo zvinopa vanokurapa mukana wekuongorora maitiro ekurapa. Pasinei nechikonzero chekushandisa Pregabalin, mhedzisiro dzinogara dzichinakidza.
Pregabalin inopihwa kuburikidza nemuromo, uye nekuda kweizvozvo, hapana majekiseni anobatanidzwa. Nekudaro, inoshanda semushonga wakanakisa wevashandisi vasina kugadzikana nemajekiseni. Iwe haufanire kunetseka nezverudzii, uye iwe unogona nyore kuperekedza mushonga uyu nemimwe mishonga kana uchinge waudza chiremba wako.
Iyo ine hafu yakareba-hupenyu
Kuenzaniswa nemamwe mishonga yemuromo, Pregabalin ane hupenyu hurefu hunoshanda muhurongwa hwemuviri wako, uyo unokuvimbisa iwe unogadzikana uye hunhu hwemhedzisiro. Zvichienderana nechimiro chauri kurapa nemushonga uyu, unongofanirwa kutora dhidhi yako kanokwana kaviri kana katatu pazuva uye dzimwe nguva kamwe chete pazuva pazuva mushure mekudya kwemanheru.
Iwe unogona nyore nyore atenga Pregabalin powder muhuwandu kana hwakaringana chete nezvekutenderera kwako kweruzivo kubva kuzvitoro zvakasiyana zvepa online kana zvemaresi ari padyo sezvo zviri pamutemo munzvimbo dzakawanda dzepasi. Chiremba wako anozovawo munhu akakodzera kuti aratidze kwauri kwekutenga kwaari. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwauri kutenga uye kushandisa mushonga pasina kutya kwekukakavara nemutemo.
Zvishoma zvakakomba mhedzisiro
Pregabalin inokuburitsa iwe kune yakanyanya kurwadza mhedzisiro uchienzaniswa nemamwe anticonvulsants. Iwe unozongonzwa zvakajairika mativi akadai sekusuruvara kwemusoro, kurutsa, pakati pevamwe kwemazuva ekutanga emurwere, uye anozonyangarika. Kune rimwe divi, kana iwe ukazivisa chiremba wako pakutanga zvakakwana, zvigadzirwa zvepamberi zvinogona kudzorwa zviri nyore. Nekudaro, nekuda kwechiitiko chiri nani, ita shuwa kuti usashandise kana kugadzirisa chero dosi pasina kuudza chiremba wako.
Tichitarisa ongororo dzakasiyana siyana dzePregabalin, zviri pachena kuti vashandisi vazhinji vanogutsikana nemhedzisiro yavanowana mushure mekutora mushonga. Pregabalin inogara ichishandiswa semushonga unodzora marwadzo, uye yanga ichigamuchira mhinduro yakanaka kubva kune vazhinji vevashandisi. Vanotsvagisa vezvekurapa vakaisawo zvakasiyana siyana, uye ndicho chikonzero nei FDA yakabvuma kuti ishandiswe pakurapa Epilepsy, Post-herpetic neuralgia kana kurwadziwa kunoitika mushure mekuputika, chirwere cheshuga chirwere cheuropathy uye Fibromyalgia.
Mune mamwe matunhu epasi senge muEurope, Pregabalin akatenderwa kurapwa kwekunetseka pakati pevakuru. Nekudaro, kune zvekare zvimwe zvishoma zvakataurwa zviitiko apo vamwe vashandisi vanga vaine ruzivo rwekupedzisira nemushonga. Zvinodhaka zvinoita zvakasiyana nemiviri yemunhu, uye hazvizvigone kuti zvinoshanda kwauri nekuti zvakabatsira shamwari yako. Zvimwe zviitiko zveakakomba mhedzisiro zvinokonzerwa nekunyanyisa uye kushandisa zvisizvo kwePregabalin.
Muchidimbu, ichi chikuru chinodhaka kana chishandiswa nemazvo uye nezvikonzero zvakanaka. Yakabatsira mamirioni avanhu vari kurwara nezvirwere zvakasiyana, sevakaratidzwa pamusoro. Sezvakaita chero imwe mishonga inorayirwa, iwe haufanire kutora iyo Pregabalin kunze kwekunge chiremba wako akukurudzira iwe. Kana iwe ukasangana nemarongero zvakare dzidzisa chiremba wako nekukurumidza kukubatsira iwe kuti uvakunde.
Nyika iri kuchinja, uye nhasi, unogona tenga Pregabalin online papuratifomu yedu pamutengo unodhura. Yedu webhusaiti iri mushandisi-inoshamwaridzika, zvichiita kuti zvive nyore kwauri kuti ufambe kubva pane chimwe chigadzirwa uchienda pane chimwe uyezve kuti uite odha yako mukati memasekondi. Unogona kuwana webhusaiti yedu kuburikidza neako smartphone, piritsi, kana kunyange laptop yako. Pamusoro peizvozvo, isu tinogadzira kutenderera pasirese uye mukati menguva ipfupi inogoneka. Unogona kutenga Pregabalin muhuwandu kana kunyangwe zvakaringana pamutero wako weyero.
Isu tiri vanotungamira vePregabalin vanotengesa mudunhu, uye mitengo yedu inodhura haikanganise mhando yezvigadzirwa zvedu. Isu tinopa akasiyana emhando zvigadzirwa zvekurapa muchitoro chedu chepamhepo. Nekudaro, isu tinogara tichipa zano kune vese vatengi vedu kuti vaone kuti vanoongororwa kurapwa vasati vatanga kutora zvigadzirwa zvedu. Zvigadzirwa zvedu zvekurapa zvinogona kutungamira kumhedzisiro kana zvikashandiswa zvisirizvo kana kuwandisa. Pregabalin inotengeswa inowanikawo pane yako yepamhepo mishonga yepamhepo asi ita shuwa kuti unowana kubva kumutengesi akavimbika. Haasi ese online epamhepo kana epamhepo mashopu ezvitoro anopa zvemhando zvigadzirwa.
11.Pregabalin yekurapa kurwadziwa kweNaini uye Kushushikana
Kwemakore mazhinji ikozvino, Pregabalin yakave yakakosha mune yekurapa zvakanyanya zvakanyanya pakurapwa kwemarwadzo emutsipa, anowanzozivikanwa seanoropathic kurwadziwa. Mushonga uyu unoshanda nekudzora uropi hwemakemikari anotumira chiratidzo kune dzako nerves, izvo zvinogadzirisa mwero wekurwadziwa mumuviri wako system. MuUnited States of America FDA yakabvumidza Pregabalin kurapwa kwemaronda emutsipa anokonzerwa nezvirwere zvakasiyana siyana seEpipps, Fibromyalgia, Post-herpetic neuralgia kana marwadzo anoitika mushure mekurwadziwa uye kurwara kwechirwere cheshuga.
Nekudaro, Pregabalin (148553-50-8) haisati yatenderwa kurapwa kwekushushikana muUS, kunyangwe paine mishumo yekuti vamwe vashandisi vanoishandisa off-label kudzora mamiriro acho. Mune mamwe mativi epasi senge muEurope, Pregabalin yakagamuchirwa mukurapa kwekushushikana muvakuru. Kune mamwezve asina kusimbiswa mishumo yekuti Pregabalin inogona kushandiswa kudzora kushushikana. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Pregabalin, bata chiremba wako kana kubvunza kune wako wemishonga.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Makiriniki maitiro uye mishonga inoshandiswa pakati pevarwere ve fibromyalgia vachangobva kunyorerwa amitriptyline, duloxetine, gabapentin, kana pregabalin. Arthritis kuchengetedza & kutsvagisa, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin uye pregabalin yemarwadzo-iri kuwedzera kurongedza chikonzero chekushushikana?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Kubudirira kwePregabalin mukurwadziwa kwakanyanya kwekuvhiya mushure mezvikamu zvakasiyana zvekuvhiya: meta-ongororo. mushonga, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin yekurapa kweakajairika kunetseka kusagadzikana: inogadziridza. Neuropsychiatric chirwere uye kurapwa, 9, 883.
Vakadzi vanogona kutora Primobolan (Methenolone Acetate) here?
Primo (Methenolone Acetate) chimwe chesested anabolic steroid yevakadzi
Primobolan ndiyo yakanyanya kushandiswa vanabolic steroid mukucheka steroid maitiro
Orlistat Inoshanda Sei Seweya Wekurasikirwa Zvinodhaka?	I "Tsime Rehudiki": NAD + & NMN seAdvanced